iWatermark # 1 ye-iOS - Izithombe zeWatermark | Plum Amazing
Ukudalwa kohlelo lokusebenza
iWatermark # 1 ye-iOS - Izithombe zeWatermark
Okusheshayo: 2 / 23 / 21
Izithombe zeWatermark Ukuvikela Izithombe Zakho Zedijithali Nemidwebo
I-iWatermark uhlelo lokusebenza lwe-world watermarking No. 1 lwe-iPhone ne-iPad. Stika isitayela se-copyright yakho esithombeni ngemizuzwana. IWatermark yenzelwe futhi ithathwa ngabathwebuli zithombe. Izithombe ze-Watermark njengoba uzithatha. Iqoqo le-watermark. Inombolo enkulu yamafonti. Ubuciko beWatermark bufakiwe. IWatermark yindlela elula yokubheka izithombe ze-watermark. Bheka izibuyekezo ku- Isitolo se-App iTunes futhi kuqhubeke I-Plum Amazing.
“I-iWatermark iwuhlelo lokusebenza oluhle lokukusiza ukuthi uvikele i-copyright yakho ezithombeni zakho. Umbhali wethu weKholamu kanye nowayenguMhleli Wezithombe Omkhulu wephephabhuku i-Playboy, u-Kevin Kuster, usebenzisa lolu hlelo lokusebenza njalo ukuze aphawule izithombe zakhe.” nguJoanne Carter, uMqondisi, iTheAppWhisperer
Ukubuyekeza / okokufundisa
Izithombe zeWatermark Ukuvikela Izithombe Zakho Nemidwebo Yakho.
Uhlelo olubalulekile lwe-Watermarking App for Professionals, Business and Personal Use.
iWatermark ye-iOS - Izithombe zeWatermark
Kalula, vikela futhi uvikele izithombe zakho namavidiyo ngombhalo, ingcaca, isiginesha, i-watermark ye-QR. Ukungeza i-watermark ebonakalayo ekubonisweni kwesithombe kuyakhiwa futhi kungokwakho. Ukwenza i-watermarking kuya ngokuya kubaluleke futhi kufana nokusayina igama lakho esithombeni. I-watermark ikhombisa ngobuqili, noma ngabe isithombe sakho siyaphi, ukuthi ngesakho. I-watermarking ingasetshenziselwa ukwengeza i-imeyili yakho, i-url, umlayezo womuntu siqu noma ihluzo ezimnandi kunoma yisiphi isithombe noma isithombe-skrini sePokemon Go noma ividiyo.
Thanks to users for 1983 ***** 5 star reviews on the app esitolo! Uhlelo olubalulekile lwe-Watermarking App for Professionals, Business and Personal Use. Kalula, vikela futhi uvikele izithombe zakho ngombhalo, ingcaca, isiginesha noma i-watermark ye-QR. Ukungeza i-watermark ebonakalayo ekubonisweni kwesithombe kuyakhiwa futhi kungokwakho. I-watermarking iya ngokuya ibaluleke futhi kufana nokusayina igama lakho esithombeni. I-watermark ikhombisa ngobuqili, noma ngabe isithombe sakho siyaphi, ukuthi ngesakho. I-watermarking ingasetshenziselwa ukwengeza i-imeyili yakho, i-url, umlayezo womuntu siqu noma ihluzo ezimnandi kunoma yisiphi isithombe noma isithombe-skrini sePokemon Go.
Ithole ku-Apple App Store
"I-App ye-watermark ehamba phambili kunazo zonke engizibonile kuze kube manje ku-iOS."
- UTerry White
UPhyllis Khare ubuyekeza ukuthi ungazibonisa kanjani izithombe nge-iWatermark iOS kwiwebhusayithi yeDaily Motion
Ukubuyekezwa kwevidiyo yi-Daily App Show:
Sibonga bonke abasebenzisi be-iWatermark ngokubuyekezwa okuhle, impendulo neziphakamiso.
IWatermark, ukuphela kwethebhulethi elitholakala kuwo wonke amapulatifomu e-iPhone / i-iPad, iMac neWindows. IWatermark iyithuluzi le-watermarking elithandwa kakhulu ukwengeza ukuvikelwa kwe-watermark ezithombeni zakho.
Ukwabelana ngemithombo yezokuxhumana ngesinqumo esigcwele ku-Facebook, kuFlickr, ku-Instagram, ku-Twitter, ku-Albhamu yekhamera, kubhodi yokunamathisela noma ku-imeyili (izinketho ezintathu zokuxazulula)
Q: Yini i-watermark?
IMP: Emakhulwini eminyaka adlule ama-watermark aqala njengezimpawu zokuhlonza ezazisetshenziswa ngenkathi kwenziwa iphepha. Ngesikhathi kwenziwa iphepha iphepha elimanzi lagxivizwa ngophawu / uphawu. Indawo emakiwe yahlala izacile kunephepha elizungezile, yingakho igama le-watermark. Lelo phepha, lapho lomile futhi libambelele ekukhanyeni, lalikhombisa i-watermark. Kamuva le nqubo yasetshenziselwa ukuqinisekisa ubuqiniso bemibhalo esemthethweni, imali futhi ngokuvamile ukuvimbela ukukhwabanisa.
Q: Isetshenziswa kanjani i-watermarking namuhla?
A: I-watermarking yedijithali iyindlela yakamuva yokwenza i-watermarking. Ngokufana nama-watermark asephepheni, ama-watermark edijithali asetshenziselwa ukukhomba umnikazi / umdali futhi aqinisekise imidiya yedijithali njengezithombe, umsindo nevidiyo.
Q: Kungani i-Watermark?
- Uma Izithombe / Amavidiyo zihamba njengegciwane, zindiza zingalandeki kuzo zonke izinkomba. Imvamisa, imininingwane yomnikazi / yomdali ilahlekile noma ikhohliwe.
- Gwema isimanga sokubona izithombe zakho, umsebenzi wobuciko noma amavidiyo asetshenziswa abanye, kumikhiqizo ebonakalayo, kuzikhangiso kanye / noma kuwebhu.
- Gwema izingxabano zempahla yengqondo (i-IP), ukumangalelwa okubizayo kanye nokuphathwa ikhanda okuvela kubabambi abathi ababazi ukuthi ukudalile ngokungeza ama-watermark abonakalayo kanye / noma angabonakali.
- Ngoba ukusetshenziswa okunwetshiwe kwemithombo yezokuxhumana kusheshise ijubane isithombe / ividiyo engahamba ngayo.
Q: Yini engenziwa?
✔ Ukungeza i-watermark ekhombisa ngobuqili, noma ngabe isithombe sakho noma ividiyo yakho iya kuphi, ukuthi ingeyakho.
✔ Njalo, i-watermark enegama, i-imeyili noma i-url ukuze indalo yakho ibe nokuxhumana okuthile okubonakalayo nokungabonakali kuwe.
✔ Phromotha futhi uvikele inkampani yakho, igama kanye newebhusayithi ngokufaka izixazululo kuzo zonke izithombe / amavidiyo owakhiphayo.
Konke okungenhla kudale isidingo sesoftware ukuvikela nokuqinisekisa ubunikazi bezithombe / zevidiyo.
IWatermark, ukuphela kwethebhulethi elitholakala kuwo wonke amapulatifomu e-iPhone / i-iPad, iMac neWindows. IWatermark iyithuluzi le-watermarking elidume kakhulu lezithombe.
* Thinta ukushukuma komzimba.
** Chofoza ukuhambisa indawo ye-watermark.
** Ncinza / sondeza ukuze unwebe / uthenge ubukhulu be-watermark.
** Iminwe emibili ngasikhathi sinye ukushintshanisa i-watermark iye kunoma iyiphi i-angle.
* Ukuqhutshwa kweqoqwana (konke ngasikhathi sinye) noma ngokulandelana.
* Lungisa kalula isikali se-watermark, i-opacity, ifonti, umbala, usayizi, isikhundla ne-engeli.
* Dala umbhalo wakho ocashile noma ama-watermark wesithombe noma khetha kusuka kuma-watermark wesibonelo afakiwe (kokubili umbhalo nemidwebo).
* Izibonelo ezifakiwe zombili zombhalo (amagama, izinsuku, idatha yamathegi, njll.) Kanye nemifanekiso (amasiginesha, amalogo, njll.) Ama-watermark angasetshenziswa ngokushesha.
* Amafonti ayi-162 wombhalo wakho anamanzi angu-112 + 50 namafonti e-Android.
* Ibonisa ifonti ngayinye.
* Ama-watermark aphezulu angama-34.
* Ngenisa ama-watermark wakho wokuqhafaza ngokuthumela ngokwakho i-imeyili
* Inkinobho eyodwa yokungenisa kwesiginesha yakho ukuze isetshenziswe njenge-watermark. * Qedela futhi kulula ukuyiqonda imanuwali.
* Dala i-watermark ye-QR efana nebhakhodi. Amakhodi we-QR angaqukatha imininingwane engama-4000 yolwazi. Amakhodi we-QR angabe efundwa ngeskena noma nge-smartphone ngohlelo lokusebenza olufanele oluveza imininingwane oyifakile.
I-Watermark Ukuvikela Izithombe Zakho
Ngokusayina usayine izithombe / ubuciko bakho nge-iWatermark ukuze ufune, uvikele futhi ugcine impahla yakho edumile kanye nedumela lakho.
- Izithombe zihamba njengegciwane bese zindiza emhlabeni jikelele. Izithombe ze-Watermark ezinegama lakho, i-imeyili noma i-url ukuze yakho ihlale inokuxhumana okubonakalayo nokusemthethweni kuwe.
- Yakha umkhiqizo wenkampani yakho, ngokuba nelogo yenkampani yakho kuzo zonke izithombe zakho.
- Thuthukisa inkampani yakho, igama kanye newebhusayithi ngokusebenzisa amakhodi we-QR njengama-watermark.
- Gwema ukumangala kokubona izithombe zakho kanye / noma umsebenzi wobuciko kwenye indawo kuwebhu noma esikhangisweni.
- Gwema izingxabano, amacala abizayo kanye nokuphathwa yikhanda okuvela kubabhali abathi kabazi ukuthi uyidalile.
- Gwema izingxabano zempahla yengqondo (IP).
Q: Ngifuna ukugxisha isiginesha yami njenge-watermark yami. Ngisifaka kanjani isiginesha yami yemifanekiso efana nezibonelo, uPicasso, uBen Franklin, njll.
A: Sebenzisa ithuluzi lethu lesiginesha noma wenze ihluzo le-.png kukhompyutha yakho, uzithumele i-imeyili, uvule i-imeyili kudivayisi yakho ye-Android bese uyigcina ku-albhamu yezithombe zakho. Ku-iWatermark yakha i-watermark yezithombe bese ukhetha isithombe esivela ku-albhamu yezithombe sakho ukusifaka njenge-watermark entsha.
Q: Izosebenza neCanon, Sony, Nikon, Fuji, Olympus?
OKUBALULEKILE: Amasiginesha kaJohn Hancock, uBen Franklin, uGalileo ayizibonelo nje zezimpawu zokubonisa. Bangamasiginesha angempela alaba bantu abanomlando. Zikhona njengezibonelo ukukhombisa okungenzeka. Sincoma ukuthi wakhe isiginesha yakho, ilogo noma ama-watermark ekhodi we-QR.
Xhumana nathi uma udinga usizo noma unesiphakamiso.
Mayelana nePlum Amazing
IPlum Amazing igxile ekwakheni umkhiqizo kanye nesoftware enezithombe zeMac OS, iOS, Android neWindows. IPlum Amazing yinkampani ephethwe ngasese etholakala e-US kepha inamahhovisi emhlabeni jikelele. Phakathi kwemikhiqizo yabo ethandwa kakhulu yi-CopyPaste ®, iKey, iClock ®, iWatermark®, iPixelStick, iSpeechMaker nePhotoMatte. IPlum Amazing ingumhlinzeki womhlaba wonke wezinhlelo zokusebenza zeselula neze-desktop kusukela ngo-1995.
IWatermark iyithuluzi lamapulatifomu athandwa kakhulu lezithombe zokubukisa. Itholakala ku- IMac njengeWatermark Pro, Wina njengeWatermark, I-iPhone / i-iPad futhi Android futhi. IWatermark ikuvumela ukuthi ungeze i-watermark yakho yangasese noma yebhizinisi kunoma yisiphi isithombe noma ingcaca. Uma sekufakiwe le watermark ebonakalayo ibonisa ukudala kwakho nobunikazi balesi sithombe noma umsebenzi wobuciko. IWatermark ikuvumela ukuthi udale a i-graphic, i-QR noma i-watermark yombhalo bese uyihlela ukuze ishintshe ukukhanya, ukujikeleza, umbala, usayizi, njll ngokuthinta bese wabelana kalula nge-imeyili, i-Facebook, ne-Twitter. Yabelana kuFlickr nge-imeyili.
OKUBALULEKILE: Ukwabelana ngezithombe ezinamanzi ku-Facebook, ku-Twitter naku-Instagram, lezo zinhlelo zokusebenza kumele zifakwe / zilungiselelwe kudivayisi yakho ngaphambi kokuvula i-iWatermark.
Manje kunezinguqulo ezimbili ze-iPhone / iPad / Android: iWatermark Free neWatermark. Umehluko kuphela phakathi kwalokhu ukuthi iWatermark Free ifaka i-watermark encane ethi 'iWatermark Free - Thuthukisa ukususa le watermark' ezansi kwesithombe. Enguqulweni yamahhala inkinobho yokuthuthukela enguqulweni ejwayelekile ikhona ekhasini eliyinhloko. Abaningi bazokuthola kuhle lokho, ngaphandle kwalokho kukhona ukuthuthuka okungabizi kakhulu ukususa leyo watermark. Ukuthuthuka kusekela ukuvela kwe-iWatermark, intengo yayo encane yohlelo olunje.
IWatermark iza nezibonelo zombhalo (amagama, izinsuku, njll) nemifanekiso (amasiginesha, amalogo, njll.) ama-watermark ongawasebenzisa ngokushesha ukuhlola iWatermark. Kepha kungekudala uzofuna ukudala ama-watermark akho, umbhalo noma ihluzo. Ama-watermark wombhalo ongawenza ngqo ku-iWatermark futhi uwagcinele ukusetshenziswa kabusha. Ama-watermark wezithombe, njengamasiginesha noma ama-logo, angangeniswa:
Ngokusebenzisa ithuluzi le-Signature / Graphic Scanner elitholakala kuphela ku-iWatermark. Leli thuluzi likuvumela ukuthi uthathe isithombe sesiginesha yakho noma imidwebo, usingenise ngaphakathi futhi unezela obala ngemuva ukuze usetshenziswe njenge-watermark.
Ngokusebenzisa ikhompyutha yakho (bona Imibuzo Evame Ukubuzwa ngezansi ukuthola eminye imininingwane) bese uthumela i-imeyili kuwe, kudivayisi yakho ye-iOS gcina ifayili elinamathiselwe kumtapo wezithombe. Kanye kulabhulali yezithombe ungasebenzisa lezi zithombe (njengokuthi ungumnikazi wesiginesha noma ilogo) lapho wenza i-watermark yemifanekiso.
OKUBALULEKILEI-iWatermark ibheka kuphela ikhophi yezithombe zakho. Akusoze kwashintsha isithombe sokuqala. Qiniseka njalo ukuthi wenza isipele izithombe zakho zoqobo.
Ngokusayina usayine izithombe / ubuciko bakho nge-iWatermark ukuze ufune, uvikele futhi ugcine impahla yakho nedumela lakho. Yakha umkhiqizo wenkampani yakho, ngokuba nelogo yenkampani yakho kuzo zonke izithombe zakho. Gwema ukumangala kokubona izithombe zakho kanye / noma umsebenzi wobuciko kwenye indawo kuwebhu noma kusikhangiso. Gwema izingxabano namakhanda nabakhohlisi abathi bebengazi ukuthi nguwe okudalile. Gwema ukumangalelwa okubizayo okungabandakanyeka kulezi zimo zokusetshenziswa kabi kwe-ip. Gwema izimpikiswano zengqondo.
1. Dala i-watermark. Thatha noma usebenzise isithombe ongasisebenzisa njengokwasemuva ukwakha i-watermark kungaba ngombhalo noma ngomfanekiso. Dala i-watermark yombhalo noma ye-Graphic. Gcina leyo watermark.
2. Ukubonisa isithombe ku-watermark. Thatha noma khetha isithombe bese ukhetha ku-watermark roller i-watermark oyidalile.
3. Gcina kanye / noma wabelane ngayo.
- Ku-iPhone / iPad izithombe ezinamakhompiyutha zingena ku-Camera Roll naku kufolda ye-'Watermark '.
- Kuzithombe ezinamanzi we-Android hamba 'Izithombe zeWatermarked' kusitoreji sangaphandle.
Khetha kokukhethiwe kwama-watermark wesibonelo afakiwe (kokubili umbhalo kanye nehluzo) noma engeza umbhalo wakho noma i-watermark yesithombe. I-watermark yakho enziwe ngezifiso ingaba ngumbhalo, ilogo yebhizinisi noma isiginesha yakho futhi ungalungisa kalula isikali sayo, i-opacity, ifonti, umbala ne-engeli. Ngemuva kwalokho kusuka ku-roller ye-watermark khetha esinye sezibonelo zethu noma esakho futhi ngaso leso sikhathi i-watermark noma yisiphi isithombe.
Gcina kulabhulali yezithombe zakho noma wabelane nge-Facebook / Twitter / Flickr noma nge-imeyili ezinqumweni ezahlukahlukene.
Neha Sinha 1/21/21
Noma ngabe ufuna indlela yokwabelana ngezithombe zakho ukuze uzitholele isikweletu ngazo, noma uzama ukumaketha ibhizinisi lakho, iWatermark iyithuluzi elihle elingakusiza ukuthi udale kalula futhi usebenzise i-watermark yakho.
inguquko changelog ye-6.9.3
- I-batch elungisiwe sonke isici
inguquko changelog ye-6.9.2
- facebook, twitter kanye instagram ukuthekelisa kwezithombe ezinamanzi abuyile! ukwabelana ku-facebook, twitter naku-instagram lezo zinhlelo zokusebenza kumele zifakwe futhi zingene ngemvume.
- ubuso obukhulu obukhulu (izindlela ezikhanyayo / ezimnyama ze-ui manje ziyasekelwa)
- ukuthuthukiswa kombhalo wokukhetha umbala we-watermark. izinketho eziningi. Ibuye ibe ne-eyedropper evumela ukukhetha umbala owodwa oyinhloko esithombeni ozothelwa ngamanzi. kucashile kakhulu ukusebenzisa umbala osuvele ukhona esithombeni sombala we-watermark.
- ukuthuthukiswa kwesikhi sezithombe eziningi
- ihlanganiswe ngohlobo 12.4 lwe-xcode
- iyahambisana ne-iOS 12-14.4 nangaphezulu
- futhi nokunye ukuthuthuka okuncane kepha okubalulekile
- ibuyiselwe amadivayisi we-apula wakamuva ne-os
- izinguquko ze-misc
- ushintsho ku-iOS 11 lubangele amathegi wamathegi, njengophawu lwentengiso (™), ilungelo lobunikazi (©), uphawu lwentengiso olubhalisiwe (®), usuku nesikhathi, kube nzima ukufinyelela kulo, manje sekulungisiwe.
- Kuhlanganiswe ne-xcode yakamuva
- misc. ukuthuthuka kusixhumi esibonakalayo somsebenzisi
- isebenza kahle ku-iOS 11
- kubukeka kukuhle ku-iPhone X
- izinguquko ezincane
- Kubandakanya i- «tap nav bar ukuskrolela phansi (izithombe ezintsha) nangaphezulu (endala).
- iOS 11, 10, 9 no-8; I-iPad / i-iPhone iyahambisana.
- Izithonjana ezibuyekeziwe.
- kuvuselelwe i-11
- Kuhlanganiswe ne-xcode 9
- lungisa inkinga ngokuvula izithombe kwamanye amadivayisi usebenzisa isitomuli sezithombe.
- abanye abasebenzisi lapho bethengisa iqoqo lezithombe bebebika ukuthi uhlelo lokusebenza lufriziwe lapho uhlelo lokusebenza belungafriziwe bekumatasa nje ngokulanda izithombe eziningi kusuka ku-iCloud nokungazicindezeli. lokho kuthatha isikhathi ngakho-ke sengeze ibhokisi lengxoxo elithi "Kuyalayishwa ..." ukwazisa umsebenzisi ukuthi konke kuhamba kahle futhi silinde isikhashana ukuthi lowo msebenzi uqede.
- ihlanganiswe futhi yakhiwa nge-xcode yakamuva.
- ukuthuthuka okuncane okumbalwa.
+ Lungisa: "Thumela isithombe esinamanzi ku-Instagram" manje sisebenza ngaphansi kwe-iOS9.
+ Lungisa: "Ngenisa isithombe" i-oda lokulungisa.
+ Kulungisiwe: Ukuphahlazeka kokuqalisa ngenkathi kudluliswa ifayela lama-watermark.
+ Kulungisiwe: Isikhethi sesithombe esisebenzisanayo se-iOS8.3 (okusha “PH” vs “AL” endala. “AL” isasekelwa i-iOS7)
+ Ukulungisa: Ukususa i-watermark kuzoshintshela kokulandelayo ngokuzenzakalela.
+ I-Tweak: Ukukhethwa kombala "bukhoma".
+ I-Tweak: Izakhiwo ezilawulwa nge-slider "Live" ziyashintsha ngesikhathi sangempela,
njengohlobo olulodwa lwenani kunkambu yalo yombhalo ehambisanayo.
+ I-Fixed “multi-line text ayibonisi umugqa wokugcina” isinambuzane.
Usizo lweWatermark lwe
I-iPhone / i-iPad ne-Android
Siyabonga ngokulanda iWatermark! IWatermark iyithuluzi lamapulatifomu ethandwa kakhulu lezithombe zokubukisa. Itholakala ku- IMac njengeWatermark Pro, Wina njengeWatermark, I-iPhone / i-iPad futhi Android futhi. IWatermark ikuvumela ukuthi ungeze i-watermark yakho yangasese noma yebhizinisi kunoma yisiphi isithombe noma ingcaca.
Uma sekufakiwe le watermark ebonakalayo ibonisa ukudala kwakho nobunikazi balesi sithombe noma umsebenzi wobuciko. IWatermark ikuvumela ukuthi wakhe i-graphic, i-QR noma i-watermark yombhalo bese uwahlela ukuze ushintshe ukukhanya, ukujikeleza, umbala, usayizi, njll ngokuthinta bese wabelana kalula nge-imeyili, Facebook, Futhi Twitter. Yabelana ku Flickr nge-imeyili.
Ukuvumelana kwe-iOS 14
OKUBALULEKILE: Uma usebenzisa i-iOS 14 futhi i-Apple ibeka le ngxoxo entsha ekucela izimvume zokusebenzisa zonke izithombe. Kungani? Kulula, ngoba uhlelo lokusebenza ludinga ukufinyelela izithombe zakho ukuzibonisa, likuvumela ukuthi ukhethe okukodwa bese u-watermark. Lapho uqala ukusebenzisa uhlelo lokusebenza i-Apple ifaka le ngxoxo yezimvume. Kubalulekile ukusetha le mvume kahle ukugwema inkinga yokungakwazi ukufinyelela kuzithombe zakho. Uma uthola inkinga ngokukhetha izithombe noma ukwenza i-watermark kungenxa yokuthi awukhethanga inketho engezansi.
Nganoma yisiphi isikhathi ungashintsha ukulungiselelwa ngokuthepha kuhlelo lokusebenza lwe- 'Izilungiselelo' kanye nohlobo oluphezulu kakhulu ku-iWatermark bese ukhetha lapho kuvela. Shintsha isethingi 'Yesithombe' sibe 'Zonke Izithombe'
Uhlobo lwamahhala nolukhokhelwayo
Kunezinhlelo zokusebenza ezimbili zamahhala:
iWatermark Mahhala (i-Android)
I-iWatermark Lite (iOS)
Abantu abaningi bazama eyokuqala mahhala ukuzama uhlelo lokusebenza nezici. Inesithonjana esinamahhala kusibhengezo esiluhlaza. Ayinazikhangiso futhi ikuvumela ukuthi usebenzise zonke izici kepha futhi ingeza i-watermark yethu kuzo zonke izithombe ezithi, 'Idalwe ngeWatermark Free'. Wamukelekile ukuqhubeka nokuyisebenzisa noma ukuthuthukela kuhlelo lokusebenza olungabizi kakhulu olungenayo i-watermark yethu eyengeziwe. Uma uthola inguqulo ekhokhelwayo bese ususa eyamahhala.
Isithonjana senguqulo ekhokhelwe ye-iWatermark (iOS ne-Android)
Uhlobo olukhokhelwayo lusekela ukuvela okuqhubekayo kwe-iWatermark. Njalo lapho othile ethenga ikhophi isekela izinhlelo eziningi zokuthuthukisa uhlelo lokusebenza oluzuzisa wonke umuntu. Yebo! Uhlelo lokusebenza olukhokhelwayo alungezi i-watermark yethu esithombeni sakho eyakho kuphela. Ukuthenga uhlobo olujwayelekile kusekela umsebenzi wethu oqhubekayo kulolu hlelo lokusebenza. Ngiyabonga!
OKUBALULEKILE:RKhumbula, susa inguqulo yamahhala ngemuva kokuthenga. Ingakudida ungabe usayidinga.
Uma uthanda ukuthuthuka okuqhubekayo futhi ufuna ukuthi kuqhubeke, sicela uthumele isibuyekezo se-App Store kanye / noma uvumele abangani bakho (ikakhulukazi abathwebuli bezithombe) bazi ngohlelo lokusebenza. Ukukhuluma ngawe kalula ku-Facebook, ku-Twitter, ku-Instagram Pinterest, njll. Kungasiza umuntu anqume ukuyilanda esisiza ukuthi siqhubeke siyithuthukisela yona. Siyathanda ukuzwa kuwe. Ngiyabonga kakhulu!
OKUBALULEKILE: Ungathanda ukuthi izithombe zakho ezinamanzi zibonwe ngabantu abaningi? Landela iWatermark (@twitter, @Facebook, @Instagram, @Pinterest, njll.) bese umaka imisebenzi yakho yobuciko enhle #iWatermark ukuze ifakwe!
Sithande ku-Facebook amakhuphoni, izindaba, buza imibuzo, thumela izithombe zakho ezinamanzi.
Enye isoftware yePlum Amazing
IMac / Win: Uma ungathanda ukuhlola isoftware yethu ye-Mac noma ye-Win, yiza engosini yethu bese ulanda i-tryout yamahhala. Zama i-iClock kubalulekile / okuwusizo / okujabulisayo futhi okungcono izikhathi eziyikhulu kunewashi elidala le-Apple menubar.
Ngeminye imininingwane kuzinguqulo ze-Mac noma ze-Win Chofoza lapha.
iOS / Android: Ngemuva kokusebenzisa i-iWatermark isinyathelo esilandelayo yi-iWatermark +. Uma ungumthwebuli zithombe onguchwepheshe noma umsebenzisi osindayo we-Instagram, Pinterest, noma i-Twitter uzothola iWatermark + ibaluleke kakhulu. Zama iWatermark + inguqulo yamahhala lapha. Ukuze uthole ukubuka konke kwakho konke amakhono hlola imanuwali ye-iWatermark + lapha. Njengomnikazi we-iWatermark ungathuthukisela u- $ 1.99 (ngalesi sikhathi) ngokuya ngqo esitolo sohlelo lokusebenza ukuthola inqwaba ye $ 3.99 uma-ke ukhokhele i-iWatermark yangempela (imvamisa engu-1.99) edonswa ngokuzenzakalela yi-Apple uma uthenga inqwaba eletha izindleko zokuthuthukela ku-iWatermark + u- $ 1.99 nje.
IWatermark + iyesabeka impela. Ngingakusho lokhu ngoba ngibhale imanuwali futhi angilwenzi uhlelo. Ngisebenzisa zombili iWatermark neWatermark + ngaso sonke isikhathi emsebenzini wami nakwezokungcebeleka. Ungacabangi umzuzwana ukuthi wonke amathuluzi we-watermark ayalingana. IWatermark iyona ehamba phambili. Kepha isinyathelo esilandelayo yi-iWatermark + ehluke kakhulu futhi enamandla amakhulu. Kunenani elikhulu lohlelo kuhlelo lokusebenza. I-interface yomsebenzisi ihlelwe kahle ukuthi abathwebuli bezithombe basebenza kanjani. Ungathathi izwi lami ngalo, bheka i- inhlukano or zama inguqulo yamahhala ye-iWatermark + njengoba wenzele i-iWatermark yangempela.
Sicela uthumele nge-imeyili uma unenkinga. Ukubeka isibuyekezo senkanyezi engu-1 nokubhala isikhalazo akusikho ukubuyekeza futhi akusizi ukuxazulula inkinga. Iinstead of up up a review that is actually not a review but a call for help, email us direct and we can clear things up quickly whether its bug or a misunderstanding.Ngokuthi esikhundleni sokubeka isibuyekezo okungesona esokubuyekeza kepha esokucela usizo, sithumele i-imeyili ngqo futhi singasusa izinto ngokushesha kungaba yisiphazamisi noma ukungaqondi. Imininingwane nosizo lwesithombe-skrini. Siyathanda ukukhuluma nani nonke futhi sisebenza kanzima ukuqinisekisa ukuthi wonke umuntu uyajabula. Ngiyabonga.
Izinguquko Zenguqulo ye-iOS
Izinguquko Zenguqulo -Android
Siyabonga ngokulanda iWatermark! IWatermark iyithuluzi lamapulatifomu ethandwa kakhulu lezithombe zokubukisa. Itholakala ku- IMac njengeWatermark Pro, Wina njengeWatermark, I-iPhone / i-iPad futhi Android futhi. IWatermark ikuvumela ukuthi ungeze i-watermark yakho yangasese noma yebhizinisi kunoma yisiphi isithombe noma ingcaca. Uma sekufakiwe le watermark ebonakalayo ibonisa ukudala kwakho nobunikazi balesi sithombe noma umsebenzi wobuciko. IWatermark ikuvumela ukuthi udale a i-graphic, i-QR noma i-watermark yombhalo bese uyihlela ukushintsha ukukhanya, ukujikeleza, umbala, usayizi, njll ngokuthinta bese wabelana kalula nge-imeyili Facebook, Futhi Twitter. Yabelana ku Flickr nge-imeyili.
1. Dala i-watermark (graphic noma umbhalo noma i-QR).
2. I-watermark isithombe.
OKUBALULEKILE: Ungalenzi iphutha ngokwenza i-watermark yokwenza i-watermarking empeleni.
Kokubili okungenhla udinga ukuqala ngokukhetha noma ngokuthatha isithombe.
Lapho-ke usukhethe isithombe futhi iba ingemuva kwesikrini esikhulu manje usungachofoza noma yiziphi izinkinobho ezintathu eziphansi kakhulu:
'Izithombe ze-iWatermark'ukwenza i-watermark isithombe usebenzisa ama-watermark akhelwe ngaphakathi noma owakho
'Dala i-Text Watermark(akusenzi isithombe se-watermark)
'Dala i-Graphic Watermark(akusenzi isithombe se-watermark)
Ukuchofoza le nkinobho kuzokusa ekhasini le-Watermarking. Lapha ungachofoza kumenyu engezansi kwekhasi le-Watermark, i-roller izokwehla bese ukhetha eyodwa yama-watermark ayisibonelo noma ama-watermark akho. Uma usukhethe eyodwa uzoyibona esithombeni sakho. Chofoza esithombeni noma kwimenyu ye-watermark ukuze i-roller inyamalale. Manje sebenzisa ukuthinta ukulungisa i-watermark:
Ngokuchofoza umunwe wakho ku-watermark ukuyihambisa ekhasini.
Sebenzisa ingcosana / ukusondeza ukunweba / ukwenza isivumelwano ngosayizi we-watermark.
Thinta ngeminwe emibili ngasikhathi sinye bese ujikelezisa ukushintshanisa i-watermark.
Hit save futhi igcina ikhophi yalesi sithombe ngaleyo watermark kuso kulabhulali yakho yezithombe noma ungabelana nge-imeyili, facebook, njll.
OKUBALULEKILE: ungashintsha indawo, ubungako nosayizi kepha ngeke ukwazi ukushintsha ukukhanya, ifonti, noma umbala. Ukushintsha lezo dala i-watermark entsha nganoma iyiphi yalezi zakhiwo ozifunayo.
Dala i-Watermark Yombhalo
Okokuqala khetha isithombe njengesizinda sokusiza ukudala nokubuka i-watermark yakho. Uzokwakha futhi ulondoloze i-watermark ukuze isetshenziswe kamuva hhayi empeleni ukusikhipha leso sithombe.
Uma ususekhasini le-Create Text Watermark uzobona imenyu entsha ezansi kwesobunxele ebizwa ngokuthi Hlela. Chofoza lokho bese phezulu uzobona into yemenyu Umbhalo, chofoza lokho. Kule ngxoxo yombhalo thayipha noma yini oyifunayo, njengegama lakho. Uma usukwenzile lokho ukhethe noma iyiphi enye yezinkinobho zokuhlela imenyu ukushintsha isikali, i-opacity, ifonti, umbala kanye / noma i-angle ukuze uzivumelanise nokuthanda kwakho.
Sebenzisa izinkinobho kumenyu yokuhlela ngezansi kwesokunxele ukushintsha ifonti, i-engeli, isikali, i-opacity, njll. Noma ukwenze ngokuthinta ngezindlela ezijwayelekile ze-iOS:
Ukuhambisa i-watermark vele uyithinte ngomunwe bese uyihudula lapho uthanda khona.
Chofoza inkinobho engela ukushintsha i-engeli noma ufake iminwe emibili ku-watermark bese usonta ukushintsha i-engeli.
Ukushintsha usayizi sebenzisa impintshi ejwayelekile noma ukusondeza ukuze unwebise / wenze isivumelwano ngosayizi wefonti.
Endaweni yombhalo ungathayipha kusuka kwikhibhodi bese ukhetha izinhlamvu ezikhethekile njenge- ©, ™ ne-®. Futhi usuku nesikhathi kungangezwa ku-watermark.
Khetha eyodwa yamafonti ayi-150 atholakala ku-iWatermark. Umbhalo nefonti kuboniswa kubuso befonti bangempela, i-wysiwig (okubonayo yilokho okutholayo, bheka ngezansi).
Shintsha i-engeli ngemenyu yokuhlela noma ngokufaka iminwe emibili nokujija (hhayi umdanso wama-60 kodwa isenzo sokuthinta).
Dala i-Graphic Watermark
Kuma-Watermark Wama-Graphic ungasebenzisa noma imuphi umfanekiso kodwa kufanele abe ihluzo elinezizinda ezisobala. Amasiginesha wesampula, izimpawu neminye imidwebo esiyifakayo inezizinda ezisobala futhi ingamafayela we-.png. Lokho kusho ukuthi isiginesha uqobo iyabonakala kepha ingemuva lisobala futhi likhombisa isithombe ngaphansi. Ifomethi yefayela yokwenza lokhu ibizwa nge-
Hlola Imibuzo Evame Ukubuzwa (ngezansi) noma i-Google 'png' ne 'transparency' ukuze ufunde kabanzi ngokwenza amafayela we-png anezizinda ezisobala.
Kunezindlela ezi-3 zokuthola le midwebo yangemuva esobala ku-iWatermark ongayisebenzisa njengama-watermark. Nawe ungakwenza
1. thola isithombe se-png ngokusobala kuwebhu ngokusesha. Thinta ubambe umfanekiso
2. sebenzisa ithuluzi elakhelwe ngaphakathi iWatermark Scan Signature / Graphic noma
3. yenza ifayela le-.png lesiginesha / isithombe sakho kukhompyutha yakho, ulithumele i-imeyili kuwe bese ulingenisa ukuze ulisebenzise ezithombeni zakho.
1. Thola isithombe se-.png kuwebhu.
Thola isithombe se-png ngokusobala kuwebhu ngokusesha. Thinta ubambe isithombe ukuze usonge ku-albhamu yekhamera. Lokhu kusebenza ku-iOS naku-Android.
2. Isiginesha ye-iWatermark / i-Graphic Scanner
Leli ithuluzi elikhethekile esilidalele ikakhulukazi ukungenisa amasiginesha akho nobuciko bakho ngakho-ke akudingeki ufunde ukuthi ungakwenza kanjani lokhu kukhompyutha yakho. Okokuqala usayine isiginesha yakho ngepeni elimnyama (usebenzisa okuthile okujiyile bese kuba ipeni nokuncane bese umaka womlingo ungcono kakhulu) ephepheni elimhlophe kakhulu. Ngokulandelayo khetha Yakha i-Watermark Yezithombe kusuka ekhasini eliyinhloko bese ukhetha Isiginesha Yeskena.
Uma usukwenzile lokho kuzovula ikhamera ukuthatha isithombe. Bese ekukhanyeni okuhle okukhanyayo ngaphandle kwezithunzi thatha isithombe sesiginesha yakho. Ungagcwalisa isikrini ngokusayina kwakho. Uma kubukeka kukuhle shaya inkinobho yokusebenzisa futhi izokwengeza ngokushesha ukungafihli ngemuva kwesiginesha yakho bese uyangenisa bese usibeka ngaphezulu kwanoma yisiphi isithombe osikhethile ekuqaleni. Manje ngokuchofoza ezintweni zemenyu ethi 'Hlela' ungashintsha i-opacity, i-angle, isikali ngezindlela ezijwayelekile. Uma wonga, izogcina isiginesha yakho njenge-watermark ongayisebenzisa noma kunini. Ungahle udinge ukukwenza lokhu izikhathi ezimbalwa ukuze ukuthole kahle. OKUBALULEKILE: Lokhu akusenzi i-watermark leso sithombe. Lesi sithombe siyisizinda kuphela ngenkathi kwenziwa i-watermark. Uma usudale futhi wagcina i-watermark ungayisebenzisa kunoma yisiphi isithombe ngokuzayo.
Ngaphezu kokuthwebula amasiginesha, amasiginesha wokuskena angasetshenziselwa ukungenisa ihluzo ezilula eziphakeme kakhulu.
Isithombe esingezansi siyingxenye ye- okokufundisa ngomthwebuli wezithombe uMark I-Alberhasky.
3. Dala Imidwebo Ku-Mac Yakho noma Wina Ikhompyutha, i-imeyili, Bese Uvula Ku-iWatermark.
Yenza ihluzo kukhompyutha yakho usebenzisa i-Photoshop, i-Gimp noma enye yama-eiditors wemifanekiso eminingi. Nalu uhlaka lwezinyathelo zokwenza isithombe ngomaski we-alpha obizwa nangokuthi ukubonakala.
a. Dala isithombe ngokusobala.
1) Dala isendlalelo bese udweba i-watermark kuso (noma mane unamathisele)
2) Ukuhamba ngomlingo sonke isizinda ofuna ukusicacisa. Ngemuva kwalokho shaya ususe. Ushiye isizinda se-checkerboard. Uma ungaboni i-checkerboard (ingekho ingemuva) lapho-ke kungahle kube nezinye izendlalelo odinga ukuzifihla noma ukuzisusa.
3) Gcina njenge-PNG. Ukubonisa ngale akukwazi ukwenziwa nge .jpg kufanele kube yifayela le-.png. Lokhu isixhumanisi imininingwane eminingi ngokwenza lokhu. Lapha kukhona ezinye izindlela ezi-5 zokwenza lokhu. Futhi ungakha i-google ukudala isiginesha enemvelaphi ebonakalayo ukuze uthole imininingwane engaphezulu.
b. Dlulisa ingcaca kusuka kukhompyutha yakho iye kudivayisi yakho ye-iOS noma ye-Android
Kusuka kwikhompyutha yakho thumela i-imeyili kuwe .png. Vula ku-iPhone yakho / i-iPad noma i-Android uzobona into enjengale.
Thinta futhi ubambe kumfanekiso owuthumele. Kulokhu isithonjana sayo se-iKey. Lokho kuzovela ngengxoxo engezansi. Chofoza kunkinobho ethi “Londoloza ku-Camera Roll”.
Kwizithombe ze-Android nazo zingafakwa ngqo kufolda ye-sdcard / iWatermark / Watermark bese isetshenziswa ku-iWatermark.c. Ngenisa ku-iWatermark
Ku-iWatermark thinta imenyu yokuhlela ezansi kwesikrini. Kumenyu evele inkinobho yokuthinta ethi 'Image' (bona ngezansi) thola isithombe osilondoloze kuroli yekhamera futhi sizongeniswa futhi sivele njenge-watermark esithombeni. Ungahle ufune ukushintsha ukusebenza kwayo ukuze ikwenze kubonakale ngokwengeziwe.
Umdwebo wesithonjana se-iKey kungaba yisiginesha yakho, ilogo noma omunye umfanekiso manje osekuyi-watermark yakho. Lapho usungenise i-watermark yakho yezithombe ungasebenza ngayo nganoma yiziphi izinto ezikumenyu yokuhlela ngakwesokunxele / phansi kwesikrini.
Ukushintsha isikali sebenzisa ingcosana evamile yokuncinza noma ukusondeza ukuze unwebise / wenze isivumelwano ngosayizi wefonti.
Dala i-QR Watermark
Iyini ikhodi ye-QR? I-QR isho ukuphendula okusheshayo nohlobo lwayo lwebhakhodi olungabamba imininingwane eminingi. Funda kabanzi ku- Wikipedia. I-iWatermark ye-iPhone / i-iPad ikuvumela ukufaka ikhodi yolayini eminingi yosuku ibe yikhodi ye-QR engasetshenziswa njenge-watermark. Izinhlelo zokusebenza eziningi ku-iPhone zingakwazi ukucacisa (ukuskena nokufunda) amakhodi we-QR, eyodwa i-iPhone ivele ikhombe ikhamera kukhodi ye-QR futhi izokhombisa i-url bese ibuza ukuthi uyafuna yini ukuya kuleso sixhumanisi. Ukuthola okuningi ku-iTunes App Store ebhokisini lokusesha hlobo 'QR code' ukuthola izinhlelo zokusebenza ezinquma amakhodi we-QR. I-Android inohlelo lokusebenza oluza njengohlelo lokusebenza oluzenzakalelayo olufunda amakhodi we-QR abizwa nge- 'Barcode Scanner'. Yinhle ngoba lapho ihlangana ne-URL kwikhodi ye-QR ivula isiphequluli bese ikuyisa ngqo kusayithi.
Iyini ikhodi ye-QR njenge-watermark elungele yona? Manje, esikhundleni sokungabi nalwazi kusithombe sakho ungaba nemininingwane eqonde ngqo ngawe noma ngebhizinisi lakho engaskenwa kalula uhlelo lokusebenza olufanele ku-smartphone. Akunasidingo sokuthayipha kuwebhusayithi nje ukuskena futhi kuzoya lapho kusiphequluli sayo. Ikhodi ye-QR njenge-watermark esithombeni ingenza izinto eziningi:
Xhumanisa newebhusayithi yakho. Faka ikhodi ku-URL yewebhusayithi yakho (isb. Https://plumamazing.com) watermark isithombe sakho. Izinhlelo zokusebenza zingaskena bese ziya ngqo kusayithi lakho.
Faka igama lakho, ikheli, i-imeyili, iwebhusayithi, njll. Ngakho-ke abantu bazi ukuthi lokhu kuyindalo yakho, isithombe sakho, impahla yakho yobuhlakani.
Bangakuthumela i-imeyili, baphendule noma mhlawumbe bathenge umsebenzi wakho.
Izinto eziningi esingakaze sizicabange okwamanje :)
Ungayakha Kanjani ikhodi ye-QR ku-iWatermark.
Landela okuthi 'dala i-watermark yezithombe' (ngenhla) khetha i-QR Code kwimenyu engakwesokunxele ye-EDIT (bheka isithombe-skrini ngenhla). Faka idatha ofuna ukuyifaka ikhodi. Bese ushaya inkinobho ethi GENERATE. Izokwakha futhi ifake ikhodi ye-QR. Gcina lokhu ngegama elifanele. Manje noma kunini lapho ufuna le khodi ye-QR ingasetshenziselwa ukubonisa isithombe sakho. Lapho usudale ikhodi ye-QR kuhle ukuyivivinya.
Ukususa i-watermark nakho kulula. Khetha isithombe noma uthathe esisodwa.
Ye-iPhone / iPad - khetha inkinobho yokwenza i-Text Watermark noma i-Graphic Watermark. Ngezansi kwesikrini khetha ithebhu yokuhamba yeWatermark bese ku-roller eqhamukayo khetha i-watermark ofuna ukuyisusa bese ushaya inkinobho ebomvu ngo - kuyo.
Okwe-Android - khetha inkinobho yokwenza i-Graphic Watermark. Ngezansi kwesikrini khetha ithebhu yokuhambisa i-Watermark bese ku-roller eqhamukayo khetha i-watermark ofuna ukuyisusa bese ucindezela inkinobho ebomvu ngo - kuyo.
Gcina bese Wabelana
Uma ushaya inkinobho yokulondoloza ngezansi kwesokudla ngemuva kokubonisa isithombe ingxoxo engenhla ivela. Lapha unga:
Gcina kulabhulali yezithombe.
Thumela i-imeyili ngekhwalithi ephelele nosayizi. (I-imeyili itholakala kuphela uma usethe i-imeyili ephumayo kudivayisi yakho ye-iOS)
Thumela i-imeyili ngekhwalithi engatheni ngosayizi omncane.
Thumela i-imeyili ngamanani amancane nosayizi omncane kodwa okusabukeka kukuhle kuwebhu.
Faka kufayela lakho le- Facebook i-akhawunti.
Layisha ku- Twitter
Khetha Izithombe noma Izithombe Eziningi
Ukufinyelela kuzithombe kufanele kuvulwe. Ukuqinisekisa ukuthi lokhu kuvuliwe ku:
IOS 6 iya kuzilungiselelo: ubumfihlo: izithombe bese ufaka iswishi ekusebenziseni izithombe.
IOS 5 iya kuzilungiselelo: ubumfihlo: amasevisi endawo: futhi uqiniseke ukuthi iWatermark ivuliwe. Asisebenzisi idatha yendawo kepha lokhu kudinga ukuvulwa ukuze kukhethwe okuningi ukuze kusebenze.
Izithombe zeWatch Watermarking
Khetha ngaphezulu isithombe esisodwa ukuqala njengasesikrinini esingenhla. Shaya inkinobho ethi 'Kwenziwe' bese esikrinini esikhulu ukhethe inkinobho yeWatermark bese ukhetha eyodwa yakho noma ama-watermark ethu. Ngemuva kokuhlanganyela (gcina kuma-albhamu noma ku-facebook, njll) kuzohamba isithombe ngasinye ngokulandelana futhi ungagcina lapho uthanda khona (i-albhamu, i-flickr, i-facebook, njll.)
Sebenzisa inkinobho Yesikhundla ukuphina ama-watermark endaweni efanayo yesithombe ngasinye. Chofoza inkinobho yesikhundla kuma-Watermark wombhalo noma we-Graphic futhi uzothola ibhokisi ngenhla. Khetha indawo evundlile nendawo emi mpo (njengakwesobunxele, phezulu) ukubeka i-watermark endaweni efanayo isikhathi ngasinye sezithombe ngazinye noma izithombe ze-batch.
Ithuluzi lesikhundla libaluleke kakhulu uma unezithombe eziningi ukwenza inqubo ye-batch, okuyizindlela ezihlukile (i-portrait noma i-landscape) noma ukulungiswa okuhlukile futhi ufuna ukuthi i-watermark ivele endaweni efanayo ngakunye.
Q: Uyini umehluko phakathi kweWatermark Free neWatermark zombili ze-iPhone / iPad?
A: Umehluko kuphela phakathi kwalokhu ukuthi iWatermark Free ifaka i-watermark encane ethi 'iWatermark Free - Thuthukisa ukususa le watermark' ezansi kwesithombe. Enguqulweni yamahhala inkinobho yokuthuthukela enguqulweni ejwayelekile isekhasini eliyinhloko. Abaningi bazokuthola kwanele. Ngaphandle kwalokho thuthukisa ukuze ususe leyo watermark. Ukwenza ngcono kusekela ukuvela kwe-iWatermark, intengo yayo encane yohlelo olunjalo lobuchwepheshe.
Q: Uyini umehluko phakathi kwe-iWatermark ku-iOS ne-Android?
A: Hhayi kakhulu ngakho-ke sisebenzisa incwajana efanayo. Uhlobo lwe-Android luyawagcina amafayela endaweni ehlukile. Impendulo iku-Q & A elandelayo.
Q: Ngigcinile kungani ngingasitholi isithombe sami esine-watermark?
A: Lezi izinto ezi-2 ezihlukene ukonga (1) i-watermark noma (2) isithombe esine-watermark. Musa ukudida omunye komunye.
1. Vula isithombe, dala umbhalo noma i-watermark yezithombe bese ugcine i-watermark kuphela.
2. Vula isithombe, engeza i-watermark egciniwe, i-watermark isithombe bese ulondoloza leso sithombe esine-watermark.
Ngenkathi wenza u-1 (ngenhla) kungenzeka ukuthi udidekile ngoba lapho wenza i-watermark ulayisha isithombe kuqala ukuze ubone ukuthi i-watermark izobukeka kanjani esithombeni. Uma uyigcina konga i-watermark osanda kuyidala hhayi isithombe. I-watermark igcinwa kuroli yekhamera lapho ingasetshenziswa khona noma kunini.
1 ikuvumela ukuthi udale ama-watermark ahlukile ongawakhetha noma kunini ngokuhamba kwesikhathi ezithombeni ze-watermark kalula.
I-2 empeleni iwwatermarking nokulondolozwa kwesithombe esine-watermark.
QInguqulo ye-Android igcina kuphi amafayela ayo.
A: Uma uqala okokuqala inguqulo ye-Android ibeka ingxoxo ethi, “Ithiphu ewusizo: Izithombe ezinamakhompiyutha usebenzisa lolu hlelo lokusebenza zigcinwa ngaphakathi kwefolda ebhalwe ukuthi 'iWatermarked Images' kusitoreji sakho sangaphandle. Ungafinyelela kuzo usebenzisa uhlelo lokusebenza lwesiphequluli sefayela noma ngokusebenzisa igalari ”.
Q: Uyini umehluko phakathi kwe-iWatermark ye-iPhone / iPad nezinguqulo zedeskithophu ze-Mac / Win?
AIzinguqulo zedeskithophu zisebenzisa ama-processor asheshayo nesibonisi esikhulu. Izinhlobo zedeskithophu zinamakhono amaningi, zingaphatha izithombe ezinkulu kakhulu futhi kulula ukuzisebenzisa kumakhulu noma ezinkulungwaneni zezithombe ekuhambeni komsebenzi kwabathwebuli zithombe. Uhlobo lwe-iPhone / iPad lwenzelwe ukukuvumela ukuthi usebenzise ukuthinta ukushintsha amapharamitha ahlukahlukene. Zombili zenzelwe ukulingana i-hardware yazo. Ukuthola kabanzi ngena lapha iWatermark Pro ye-Mac futhi iWatermark yeWin. Njengathi ku-Facebook ukuthola izindaba nesigqebhezana esikhethekile sesaphulelo se-Mac noma i-Win version.
Q: Kungani kufanele ngibheke izithombe engizibeke ku-Facebook, Twitter, Instagram, Tumblr, njll.
A: Umbuzo omuhle kakhulu! Ngoba zonke lezo zinsizakalo zisusa imethadatha yakho futhi akukho lutho olubopha leso sithombe kuwe. Abantu bangavele bahudulele isithombe sakho kudeskithophu yabo bese babelana nabanye kuze kungabikho ukuxhumana kuwe futhi kungabikho lwazi efayeleni elithi ulidalile noma ungumnikazi walo. I-watermark iqinisekisa ukuthi wonke umuntu ucacelwa iqiniso lokuthi isithombe siyi-IP yakho (impahla enobuhlakani bengqondo). Awusoze wazi ukuthi isithombe osithathile sizoqala ukusabalala. Zilungiselele.
QNgabe iWatermark Pro igcina isithombe ngokulungiswa okuphezulu kwi-albhamu yezithombe?
A: Yebo, iWatermark ye-iPhone yonga ngokulungiswa okuphezulu kakhulu ku-albhamu yezithombe. Kungakukhombisa isinqumo esincishisiwe sokubonisa kwakho ukuthuthukisa ijubane kepha umphumela wokugcina ulingana nokufaka. Ungathumela ne-imeyili izithombe ezinamanzi ngqo kusuka kuhlelo lokusebenza ngokukhetha kwakho izinqumo kufaka phakathi ukulungiswa okuphezulu. Kungenzeka ukuthi uma uzama ukuthumela i-imeyili kusuka ku-albhamu yezithombe uqobo futhi uku-3g (hhayi i-wifi) i-Apple ikhetha ukwehlisa ukulungiswa kwezithombe. Lokho akuhlangene ne-iWatermark. Inokuthintana nokukhethwa yi-Apple, i-ATT nokukhulisa umkhawulokudonsa we-3G.
Q: Ngiwasebenzisa kanjani amafonti avela ku-iPhone / iPad noma inguqulo ye-Android yeWatermark kuMac Version?
A: Ukuze ukhiphe amafonti kuhlelo lokusebenza lwe-iWatermark iPhone udinga ukuthola ukuthi kugcinwa kuphi uhlelo lokusebenza lwe-iPhone kwi-Mac.
Ku-iTunes, ifasitelana lezinhlelo zokusebenza, lawula + chofoza uhlelo lokusebenza, bese ukhetha u- “Show in Finder”.
Izoveza ifayela elitholakala lapha:
IMacintosh HD> Abasebenzisi> * Igama lomsebenzisi *> Umculo> iTunes> Izicelo Zamaselula
futhi izogqamisa ifayela elibizwa nge-iWatermark.ipa Uma idluliselwe ku-Mac noma Win uhlelo lokusebenza lwe-iWatermark.
Kopisha leli fayela. Ukhiye wokukhetha bese uhudulela leli fayela kudeskithophu ukuze ulikopishe lapho. kufanele manje isesefolda yangempela kanye nekhophi kudeskithophu yakho.
Shintsha igama lesandiso sedeskithophu libe yi .zip. ngakho-ke manje kufanele iqanjwe nge-Watermark.zip
Qhafaza kabili ukuze uqaqe izinto. manje uzoba nefolda, ngaphakathi kukhona lezi zinto:
Chofoza ifolda ye-Payload bese ulawula u-chofoza kufayela le-iWatermark futhi uzothola imenyu yokudonsela ngenhla.
Chofoza ku-'Bonisa okuqukethwe kwephakheji 'futhi ngaphakathi lapho uzothola wonke amafonti.
Qhafaza kabili ifonti ukuyifaka kwi-Mac.
Q: Ngikhetha ukuthi 'Ungavumeli ukufinyelela kwe-iWatermark ezithombeni' ngengozi. Ngikuvula kanjani lokho i-iWatermark?
A: Iya kuzilungiselelo: ubumfihlo: izithombe bese lapho uvule iswishi ye-iWatermark.
QNgiyihambisa kanjani i-watermark?
A: Ukuhambisa i-watermark vele uyithinte ngomunwe bese uyihudula lapho uthanda khona. Futhi ungashintsha usayizi wefonti, isikali (usebenzisa ingcosana / ukusondeza) bese ushintsha i-engeli (ukujija kweminwe emibili) ngqo ngokuthinta.
Q: Ngabe iWatermark idlulisa imininingwane ye-EXIF kusuka esithombeni sokuqala?
A: Yebo, noma isiphi isithombe esine-watermark osigcina ku-Photo Album noma osithumela nge-imeyili sinemininingwane yoqobo ye-EXIF kubandakanya imininingwane ye-GPS.
Q: Ngithole ingozi ngenzenjani.
A: Ukungajwayelekile kwayo kepha ukuphahlazeka kungenzeka ngezizathu ezi-4 futhi kunezixazululo ezilula.
1.Ukulandwa okubi lapho kufanele ususe inguqulo ku-iPhone / iPad yakho naku-iTunes noma kudivayisi ye-Android bese uyilayisha kabusha.
2. Usebenzisa izithombe ezivela kwi-SLR okungama-megs ayi-10 noma ngaphezulu usayizi. IWatermark ye-iPhone yenzelwe izithombe ze-iPhone ne-iPad. Izosebenza kwezinye izithombe ezinkulu kepha khumbula ukukhawulelwa kwememori kumadivayisi we-Android ne-iOS njengamanje.
3. Kukhona okwenzekayo ngamafoni OS. Qala kabusha ukubuyisela ifoni esimeni sayo esizenzakalelayo.
4. Ayikho imemori eyanele esele kudivayisi. Isixazululo simane susa i-podcast, ividiyo noma okunye okuqukethwe kwesikhashana.
Ngemuva kokuthi ubheke futhi wenze okungenhla futhi une-bug engaguquki sicela usazise imininingwane yokuyikhiqiza kabusha futhi uma singakwazi ukuyikhiqiza kabusha siyakwazi ukuyilungisa.
Q: Ngifuna ukusebenzisa isiginesha yami njenge-watermark ebonakalayo yezithombe zami. Ngifaka kanjani ihluzo njengezibonelo ezisayinwe nguPicasso, uBen Franklin, njll.
A: Kunezindlela ezi-2:
sebenzisa okwakhelwe kuSiginesha Yeskena esemenyu yokuHlela lapho uchofoza ku-Yakha i-Watermark Yesithombe.
yenza imidwebo ekhompyutheni yakho bese uthumela lelo fayela nge-imeyili, ugcine ifayili elinamathiselwe kulabhulali yezithombe. Lapho kuzoba kumtapo wezithombe we-iPhones lapho ungakuthola khona ngaphakathi kwe-iWatermark ukubheka izithombe zakho.
Nalu uhlaka lwalezo zinyathelo:
Ukubonisa okusobala kudinga ukwenziwa ku-Photoshop kanjena:
1) dala isendlalelo bese udweba i-watermark kuso (noma unamathisele okulula)
2) umlingo wand zonke whitness, ke hit susa. Ushiye isizinda se-checkerboard okungukuthi
3) fihla ungqimba wangemuva
4) gcina njenge-PNG. Ukubonisa ngale akukwazi ukwenziwa nge .jpg kufanele kube yifayela le-.png.
Imininingwane eminingi ngenqubo ingezansi.
Sebenzisa noma yimuphi umdwebo njenge-watermark. Ukuze usebenzise isiginesha yakho, okokuqala udinga ukuskena kusiginesha yakho bese uqeda ingemuva. Uma unesiginesha enemvelaphi emhlophe lokho kuzofihla ingxenye yesithombe sakho, i-watermark yesiginesha izobukeka njengebhulokhi emhlophe. Ukuze uqiniseke ukuthi lokho akwenzeki faka isiginesha yakho eskeniwe kumhleli wezithombe njenge-Photoshop (noma omunye umhleli wehluzo I-Gimp okumahhala) vula isiginesha yakho, susa ingemuva elimhlophe ngethuluzi lomlingo bese ulondoloza ifayela njengefayela le-.png. Kubalulekile ukuthi leli fayela liyifayela le-.png ngoba ifayela le-jpg alikuvumeli ukuba nesendlalelo esobala.
Lokhu isixhumanisi ikunikeza izinyathelo zokwenza lokhu. Lapha kukhona ezinye izindlela ezi-5 zokwenza lokhu. Futhi ungakha i-google ukudala isiginesha enemvelaphi ebonakalayo ukuze uthole imininingwane engaphezulu.
Ngendlela elula yokuyithumela ku-iPhone / iPad yakho ukuthumela lelo fayela nge-imeyili, vula i-imeyili bese ulondoloza ifayela elinamathiselwe kumtapo wezithombe. Kukhona nezinye izindlela namathuluzi okudlulisa imidwebo kumtapo wezithombe ku-iPhone. Ku-Android ungagcina imidwebo ye-png eqonde kusitoreji sefoni.
Ngemuva kwalokho ku-iWatermark wenza i-watermark yezithombe bese usebenzisa isithombe sakho sesiginesha (kusuka kulabhulali yezithombe ze-iPhone) usinike igama lakho. Ungaba nokuningi kwalokhu ezinqumweni ezihlukile, ukujikeleza, ama-opacities, njll futhi unikeze ngamunye igama lokulikhomba.
Q: Isebenza kanjani i-Photo Stream? ngifaka isithombe ku-Photo Stream esikhundleni se-Camera Roll?
A: Lokhu kulawulwa yi-Apple hhayi ngathi. Imininingwane engaphezulu ilapha.
Q: Ngiwasusa kanjani amasiginesha wesibonelo namalogo ahlinzekwayo?
A: Khetha isithombe (ukwenza njengesizinda) bese uchofoza ukudala i-watermark yezithombe. Qhafaza ngokulandelayo ku-watermark bese i-roller izovela. Chofoza uphawu olubomvu ukusula leso sibonelo.
Q: Ngilahlekelwe yifoni yami futhi ngidinga ukulanda kabusha inguqulo ye-iPhone / iPad (noma ye-Android). Ngabe kufanele ngikhokhe futhi?
ACha. Kokubili Isitolo se-Apple iTunes futhi -Google Play sikuvumele uphinde ulande izinhlelo zokusebenza osuvele uzithengile futhi izinqubomgomo zazo zikulawo ma-link.
QIngabe ikhona inguqulo ye-iWatermark ye-Mac noma iWindows?
A: Yebo, ayatholakala kusayithi lethu lapha. Banamandla kakhulu ikakhulukazi iWatermark Pro entsha ye-Mac. Ivumela ama-watermark amaningi ngasikhathi sinye, isebenzisa ukucubungula okufanayo (FAST) futhi inemiphumela eminingi nokuguquguquka. Kuhle kubathwebuli zithombe.
Q: Uma ngifuna ukusebenzisa iWatermark kuzo zombili i-iPad ne-iPhone, ngidinga ukukhokhela izinhlelo zokusebenza ezimbili noma eyodwa nje?
A: Abanye abenzi bohlelo lokusebenza bafuna ukuthi ukhokhe kabili. Asazi. IWatermark efanayo isebenza kahle ku-iPhone naku-iPad. Ngokomthetho ungumnikazi wakho kokubili futhi ungaba nesoftware yakho kukho kokubili. Kepha ngicela uthole abangani bakho ukuthi bathenge eyodwa noma babeke isibuyekezo esihle sezinkanyezi ezi-5 kusitolo sohlelo lokusebenza lwe-iTunes ngoba i-.99 kuphela ne-apula lithola ingxenye yesithathu yalokho. Kokubili lokho kusisiza ukuthi sigcine ukuthuthuka, ukuhlela nokwenza ngcono uhlelo lokusebenza.
OKUBALULEKILE: Amasiginesha kaJohn Hancock, uBen Franklin, uGalileo ayizibonelo nje zezimpawu zokubonisa. Bangamasiginesha ayiqiniso alaba bantu. Ngamunye waskenwa, wafakwa ngekhompyutha, ingemuva lasuswa lagcinwa njengamafayela we-.png. Lezi zifakiwe ukuzijabulisa nokukhombisa okungenzeka. Sincoma ukuthi wakhe isiginesha yakho noma usebenzise ilogo yakho ezithombeni zakho. Bona imininingwane eku-Q & A engenhla mayelana nokuthi ungakha kanjani futhi ufake isiginesha noma ilogo yakho ku-iWatermark. Uma ungafuni ukudala i-watermark yakho yemifanekiso ungahlala wenza ama-watermark wombhalo njengoba uwadinga.
Abantu bathanda iWatermark. Kangangokuthi sithole ukuthi asikwazi ukuthuthukisa izici ne-interface yomsebenzisi ngoba bayithande njengoba injalo futhi bebengafuni ukuthi iguquke. Ngakho-ke lapho sinemibono yenguqulo enesixhumi esibonakalayo esisha (indlela yokusebenzisa uhlelo) nezici ezintsha ezingalingani ku-iWatermark asikwazanga ukuyiguqula ngakho-ke sakhe uhlelo lokusebenza olusha salubiza iWatermark +.
IWatermark yanelisa izidingo zokubuka izinto abantu abaningi abanazo. Kepha kubathwebuli bezithombe, abathwebuli bezithombe abangochwepheshe kanye nabantu abanezidingo ezinkulu iWatermark + badaliwe. Inezinhlobo eziningi ze-iWatermark, ungasebenzisa ama-watermark amaningi ngasikhathi sinye, futhi wenze izinto eziningi ezingenakwenzeka ku-iWatermark. Abaningi bathi inamandla kakhulu kunezinhlelo zokusebenza eziningi zedeskithophu. Kubuye kube ukweba kubheka intengo yezinhlelo zokusebenza zedeskithophu nenani elikhulu lamahora wokuhlela ku-iWatermark +. Ngemuva kwalokho unezinhlelo zokusebenza zethu zombili. Ungathuthukisa kusuka ku-iWatermark uye ku-iWatermark + kalula. Thepha lapha ukuthola imininingwane ku-iWatermark + nokuthi ungayithuthukisa kanjani.
Sicela usithumelele iziphakamiso zakho, izimbungulu futhi usitshele nje ukuthi uyithanda kanjani lapha. Sithumele i-imeyili isilinganiso esihle nesixhumanisi esizeni sakho. Uma unesithombe esihle nge-watermark zizwe ukhululekile ukusithumela kanye. Singakujabulela ukuzwa kuwe.
Sijoyine ku-Facebook bese uthola izindaba kanye nekhuphoni lesaphulelo se-Mac noma iWindows version yeWatermark. Sebenzisa ideskithophu yakho ngokuhlanganyela ne-iPhone yakho noma inguqulo ye-Android yeWatermark.
IWatermark ithole ukubuyekezwa kwezinkanyezi ezi-5 kulokhu Indawo yokulanda nokubuyekeza yaseVietnam
Isikrini sokubuka konke esihle kakhulu se-iWatermark ne-iWatermark + sikaThabitha Carro
Le vidiyo ye-screencast ivela kuPhylis Kare
Screencast ngokusebenza kwesicabucabu
UKatherine Roussopoulos wenze lesi sikrini esifundisayo.
IPlum Amazing inikezelwe ekudaleni izinhlelo zokusebenza ezibalulekile ze-iOS, Windows, Android ne-Mac.
I-Plum Amazing inikeze izinhlelo zokusebenza emhlabeni wonke kusukela ngekhulu leminyaka elidlule. Ukwakha nokuthengisa isoftware yeMac and Win ngaleli sayithi plumamazing.com. Izinhlelo zethu zokusebenza ze-Android zifakiwe ku-Google Play. I-App Store yakwa-Apple ifaka i-iOS yethu nezinye izinhlelo zokusebenza ze-Mac.
Siphinde senze ukuthuthukiswa kohlelo lokusebenza lwezinkampani namakhasimende. Zizwe ukhululekile ukuxhumana nathi.
Izindaba nokuningi (okuvamile)
© 2019 PLum Amazing Wonke amalungelo agodliwe
Ezomthetho | Ubumfihlo
× imikhiqizo (imikhiqizo) engezwe enqoleni → ×
Siyayithokozela Impendulo yakho
Sizophendula ngokushesha okukhulu
IPlum Amazing, LLC